EVY's Kitchen: အာဗင်မသုံးတဲ့ ပျားရည်ကြက်ကင်
ခရစ်စမတ်ရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့လည်း ဒီကစပြီး ခရစ်စမတ်ရာသီစာလေးများကို အလျင်းသင့်သလိုတင်တော့မယ်နော် (မဟုတ်လဲ အဲလိုပြောပြီး တင်ချင်သလိုတင်နေပါပဲလေ :P) ။ ဒါလေးကတော့ ကြက်ကင်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီးစားလို့ သင့်တော်တဲ့ဟင်းပွဲပေါ့။ အာဗင်သုံးစရာမလိုတာကြောင့် စမ်းကြည့်ချင်သူများ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ Happy call ကိုသုံးပြီးကင်တာကြောင့် အာဗင်မှာကင်သလို မခြောက်ပဲ ခပ်စိုစိုလေးနဲ့ စားလို့တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်
ခုဒီမှာကင်ပြထားတာကတော့ ပျားရည်ငရုပ်ကောင်းကြက်ကင်ပါ။ လိုက်လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လိုသလိုထည့်ချင်တာထပ်ထည့်နော်။ ပျက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကြက်အသားထဲကို အရသာဝင်အောင် ညလုံးပေါက်နှပ်ထားတာ အဓိကပါပဲ။ လွယ်ကူပြီးအရသာရှိတဲ့ ကြက်ကင်နည်းမို့ လုပ်နည်းလေးကို မျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ပျားရည် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငရုပ်ကောင်း(အကြမ်းကြိတ်ထားတဲ့ ငရုပ်ကောင်း) လက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်းခွဲ
ရှာလကာရည် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆား လက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်းမောက်မောက်
ကြက်သားကို အကောင်မပျက်အောင် အထဲကကလီစာများထုတ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားပါ။
ပြီးရင် ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ခက်ရင်းနဲ့ထိုးထားလိုက်ပါ (အရသာတွေအသားထဲပိုဝင်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်)
နောက်ကြက်ကျောရိုးဘက်ကနေပြီး ခွဲချလိုက်ပြီးမှ ဆော့စ်တွေကိုသုတ်လိမ်းပါမယ် (ဆော့လိမ်းတဲ့ အခါမှာလည်း အရေပြားအောက်ကိုဆော့ထည့်ပေးပြီး အသာအယာနယ်ပေးပါ၊ ကြက်အသားနဲ့ အရေပြားကြားကို လက်လေးနဲ့အသာထိုးပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်။ ကြက်အရေပြားတော့ မပေါက်စေနဲ့ပေါ့နော်)
ပြီးရင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁ ညနှပ်ထားပေးပါ။
နောက်နေ့မှ ထုတ်ပြီး ကင်မယ့်ဗန်းထဲကို ပုံပါအတိုင်းထည့်ပေးပြီး သံလွင်ဆီအနည်းငယ်ဆမ်းပေးပါ။ (ကြက်ကို ဒီလိုနည်းမျိုးနဲ့ကင်ခြင်းဟာ အကောင်လုံးလိုက်ကြီးကင်တာထက်စာရင် ခြောက်ကပ်မှုနည်းစေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် ကြက်ရင်ပုံက ခပ်မြင့်မြင့်မို့လို့ တခြားအစိတ်အပိုင်းထက်စာရင် အရင်ကျက်ပြီးတအားခြောက်စေပါတယ်)
ပြီးရင် အာလုံး ၊ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေ ထည့်ပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီ အာဗင်မှာ နာရီဝက်ကင်ပေးရင်ရပါပြီ။ ကျွန်မကတော့ Happy Call အိုးကိုသုံးပြီးကင်ပါတယ်။ မီးပေါ်မှာအဖုံးပိတ်ထားပြီး ၁၅မိနစ်နေရင် တစ်ဖက်လှန်ပေးပြီး ၁၅ မိနစ်ထပ်ထားပေးပါ။
ဒါဆိုရင် အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အိမ်လုပ်ကြက်ကင်နဲ့ ဧည့်ခံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ ။
ကိုယ့်ဖာကိုယ်တော့ လုပ်ရမှာပျင်းလို့ Evy ဆီပြေးလာပြီး ဧည့်သည်လုပ်ချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်
ပျားရည်ကြက်ကင်ကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခုလိုဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်ကျမှ လာကြည့်မိတယ် :P စိတ်ဝင်စားစရာမို့ မိတ်ဆုံစားပွဲမျိုးမှာ လုပ်စားရရင်ကောင်းမယ် :) နည်းလေးမှတ်သွားတယ် Evy ရေ။ ကျေးဇူးနော်။
Love it,sis.Thanks for sharing !
new year မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်စားချင်တယ်...
I will try with happycall soon.thks.